Shiinaha kalluunka kalluumeysiga iyo alaab-qeybiyeyaasha. Gelken
Kalluunka collagen waxa ku jira in ka badan 18 nooc oo ah amino acids, nafaqo leh, fududna in la nuugo, ayaa lagu dabaqay cabitaannada, keega, nacnaca iyo alaabada kale, ee ku jira cufnaanta cuntada iyo emulsification, waxayna kordhisaa dheefshiidka fudud iyo nuugista borotiinka ku jira cuntada, waxay leeyihiin saameyn ku yeelashada daaweynta.
Iibinta peptides-ka kolajka cusub ee laga helo kalluunka badda lagu hayo ee duurjoogta ah ayaa kordhay 70% inta udhaxeysa 2018 iyo 2019. "Tayada sare" ee kalluunka collagen iyo raacdada nolol waarta oo caafimaad qabta ayaa horseedaysa baahida loo qabo alaabooyinkan.
Shaki kuma jiro in macaamiil aad iyo aad u tiro badani ay raadinayaan kalluunka laga helo kalluunka laga helo ee loo yaqaan 'gelatin beauty' iyo wax soo saarka cuntada lagu daro.
Sahanku wuxuu muujiyay in boqolkiiba 84 macaamiisha ay muujiyeen doorbid cad kalluunka collagen peptides, oo leh 51 boqolkiiba iyaga ka mid ah ayaa doonaya inay qiimo sare ku bixiyaan alaabtan.
In kasta oo baahida loo qabo peptides-ka collagen ee kalluunka la beero ay weli tahay mid xoog badan, haddana si joogto ah looga helo saliidaha loo yaqaan 'collagen peptides' ayaa sidoo kale caan ka ah.
Sida ku xusan falanqaynta, "tayada sare" ee peptides-ka collagen ee kalluunka bada iyo koritaanka degdega ah ee qaab nololeedka waara iyo caafimaadka ayaa keenaya baahida loo qabo alaabtan.
Dadka leh shuruudaha cuntada ee gaarka ah, sida dhaqtarka pescaters ama macaamiisha aan cunin hilibka qaarkood sababo diimeed, ayaa sidoo kale sii hurinaya kororka.
Collagen, waa eray caan ah laakiin aan aad loo aqoon. Waxyaabaha ku jira maqaarka bini'aadamka ayaa aad ugu badan in ka badan 70%, sameysma shabaqa fiberka loo yaqaan 'collagen fiber net', si loo ilaaliyo qoyaanka maqaarka, dabacsanaanta. Haddii collagen uu bilaabo inuu lumo, markaa waxaan wajihi karnaa dhammaan noocyada maqaarka dhibaatooyinka sida duuduubnaanta, duufaanka, qallajinta iyo wixii la mid ah Isla waqtigaas, kolajka ayaa sidoo kale ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee kiliyaha, lumitaankiisuna sidoo kale wuxuu isha ka dhigi karaa mid xun.
Hore: Collagen Peptide
Xiga: Kalluunka Collagen Peptide